မျှမျှတတအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ၏3ရှုထောင့် | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 26, 2016 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2016 Douglas Karr
များစွာသောစျေးကွက်သမားများသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်၎င်းတို့၏ဗျူဟာကိုကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အီးမေး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်မြင့်မားသော ၀ င်လာသည့်စာတိုက်ပုံးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နေသောကြီးမားသည့်အတိုင်းအတာများပျက်ကွက်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြီးတွင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်မဆိုရှုထောင့် ၃ ခုရှိသည်။
အီးမေးပို့နိုင်သည် - ဒါကသင့်ရဲ့အီးမေးလ်က inbox ထဲကိုရောက်မရောက်ရောက်သွားတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်း၏သန့်ရှင်းမှု၊ သင်တင်ပို့သည့်အကြောင်းအရာအပြင်သင်၏အိုင်ပီပို့သည့်လိပ်စာ၊ သင်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ESP) ၏တရားဝင်မှုပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအချက် - သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ဘယ်လောက်များများ inbox ထဲကိုရောက်သွားတယ်၊ junk folder ကိုရှောင်ရှားပြီးဒါမှမဟုတ် bounce ဖြစ်သွားတယ်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းသော ESP မရှိသောသူများသည်ဤအရာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ပေးပို့ခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်ကုန်ကျနိုင်သည်။ ငါတို့သုံးတယ် 250ok သို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ inbox နေရာချထားမှုကိုစောင့်ကြည့်.
စာရင်းပေးသွင်းသူအပြုအမူ - ဤသူတို့သည်သင်၏အီးမေးလ်လက်ခံရရှိသူများသို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ဖွင့်ခဲ့တာလား Click-through (သို့) Click-through နှုန်း (CTR)? ပြောင်းလဲခြင်း? ဤရွေ့ကားပုံမှန်အား "ထူးခြားတဲ့" ရေတွက်အဖြစ်တိုင်းတာနေကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရေတွက်ခြင်းသည်ဖွင့်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်သောသုံးစွဲသူများ၏အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖွင့်ခြင်း၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်နှင့်မမှားပါစေနှင့်။ သင်၏စာရင်း၏ကောင်းသောအပိုင်းသည်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့နှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်သင်ဘာလုပ်နေပါသနည်း။
အီးမေးလ်အကြောင်းအရာစွမ်းဆောင်ရည် - ဒါဆိုမင်းရဲ့အကြောင်းအရာကဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း, ကလစ်နှိပ်မှတဆင့်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများဘာတွေလုပ်နေလဲ? သင့်ရဲ့လင့်ခ်ဘယ်လိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ စာရင်းပေးသွင်းထားသူနှင့်ပိုကိုက်ညီရန်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသလား။ Dynamic ထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများ၊ list segmentation နှင့်နောက်ထပ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အီးမေးလ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
သင်ရှေ့သို့တိုးတက်သည်နှင့်အမျှသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဤအတိုင်းအတာများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီစာရင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ပြissuesနာတွေဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်း ၀ င်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Hosts များကိုရွေ့ပြောင်းပြီးပါပြီ။ သင်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်